“Barca waxaan xiiseeynayay ilaa 14 jirkeeygii” – Sergio Aguero – Garsoore Sports
“Barca waxaan xiiseeynayay…
Weeraryahanka reer Argentina ayaa rajeynaya inuu garoonka Camp Nou kaga garab cayaaro superstar-ka ay isku xulka yihiin ee Lionel Messi kaddib markii uu kooxda Barca u saxiixay heshiis labo sano ah.
Sergio Aguero ayaa sheegay inuu doonayay inuu ku biiro Barcelona tan iyo yaraantiisii isla markaana uusan ka laba labeyn lahayn inuu aqbalo dalabkooda haddii uu soo dhaqsan lahaa.
Cayaaryahanka heerka caalami ee dalka Argentina ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Camp Nou muddo bilooyin ah kahor inta uusan heshiis u saxiixin kooxda Isniintii kaddib markii uu ka tagay Manchester City oo uu qandaraaska u kordhin waayay.
Weeraryahankan ayaa sheegay inay ahayd riyadiisa tan iyo markii uu 14 jir ahaa inuu ku biiro Barca isla markaana uu ku faraxsan yahay inuu ku laabto dalka Spain ee uu halkaa ugusoo cayaaray markii ugu dambeeysay kooxda Athletico Madrid kahor inta aanu City ku biirin.
“Aad ayaan u faraxsanahay, waxaan isku dayi doonaa inaan wax walba oo karaankeyga ah u qabto kooxda, waxaan ka caawinayaa kooxda inay ku guuleysato waxyaabo muhiim ah. Waa farxad aad u weyn,
“Aniga ahaan, Barca marwalba waxay ii aheyd kooxda ugu fiican adduunka, Leo [Messi] sidoo kale waa uu joogaa.”
“Waxaan u sheegay [madaxweyne Joan] Laporta kahor taas anigoo wiil ah waxaan ku iri:” Maalin uun hubaal waa ay i ogaan doonaan. ” Wayna timid, aniga ma aanan qiyaasin, laakiin qof walba ayaa u ordaya inuu u saxiixo Barca. ”
Wuxuu raaciyay: “Markii ay Barca isoo codsatay aniga xitaa ma aanan labalaaban, waxaan u sheegay wakiilkeyga inaanan rabin inuu la hadlo koox kale, kaliya Barca.
“Waxay ahayd farxad aad u weyn markii ay la xiriireen wakiilkeyga. Waxaan xiiseynayay ilaa 14-jirkeyga. ””